Kutheni kwenzeka ukuba uJos Brech athunyelwe ngokumangalisayo? : UMartin Vrijland
Kutheni kwenzeka ukuba uJos Brech athunyelwe ngokumangalisayo?
Kufakwe kuyo NOKUPHATHA NICKY, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-6 Septemba 2018	• 2 Comments
Ibali elijikeleze uJos Brech, umbulali kunye noxhaphaza uNicky Verstappen, uqhutywe kwiindawo eziphakamileyo. Izolo wathunyelwa eNetherlands eneenqwelo zangasese. Ingadla ezinye! Indiza ehleliweyo yayingenakwenzeka, kuba sikhuluma ngesichengisiso esitsha esasisongela i-mafia esiya kukhululwa ngabahlobo bayo befia naliphi na ixesha. UJos Brech, okanye ngubani omele aqhubeke, ngokucacileyo akufanele kubonwe. Indiza ehleliweyo yayingakulungelekanga, kuba abantu babenokubona ubuso bakhe kwaye awukwazi ukusebenzisa isofthiwe ye-NVIDIA ukucwangcisa indlela yaseHollywood. Yintoni! Inqwelo yangasese yaphinda imiswa ngokukhawuleza emva kweholo e-Schiphol. Wenza njalo de Telegraaf kukho ukukhankanywa:
Kwakungekho i-Eindhoven Air Base, kungekhona i-Airport ye-Maastricht, kodwa 'nje' yesikhumulo sezindiza apho, emva kwexesha elide, indoda efunwa kakhulu emva kwayo yafika eNetherlands. Inqwelo emhlophe emhlophe apho umsolwa ephuma khona esuka e-Barcelona ukuya ezweni lethu ngokukhawuleza wawela emva kweholo apho iindiza zihlolwa khona.
Iveni emnyama eyimpumputhe yaya kwi-moya, ngeemoto ezimbalwa ezihamba kunye. Kwaye kwangoko wahlala ethule malunga nommandla weThermiekstraat, apho i-runway ekhona esetyenziswa kakhulu kwiindiza ezizimele.
Khawucinge ukuba siza kubona ubuso bukaJos. Kodwa ungakhathazeki (asifuni ukucinga kwakhona ngoqhinga) Jos usaya emfanekisweni ngobuso bakhe. Thabatha ingqalelo! Emva koko, siphila kwiminyaka 'Uvavanyo lukaPeter R. de Vries ngamajelo"Ngoko ke ibali kufuneka liqhubeke lenziwe lithembeke. Akukho konke esikubuzayo ukuba ngaba kukho ityala lokubulala; Kwakungekho nayo yonke loo mbuzo nokuba sithetha ngokuxhaphazwa ngokwesondo (ngokuba akukho nyi-proof ye-NFI ekhomba kulo). Hayi, ixhala ukumiswa koluntu komntu osuswe yimidiya njengomenzi wobubi (kwimeko edibana ne-PsyOp). Ingcamango yokuba i-NFI ayizange ibonise ukubulala okanye ukuxhaphazwa ngokwesondo kunye neyokufumana i-DNA ngaphandle kokuncedisa ayithethi nto nantoni na, asigwinyi. Asifuni ukuva oko! Sifuna ukubethelelwa esiphambanweni kwaye sele sisazi ukuba ngubani. Yonke into ephuma kuyo loo mihla yokucoca iviniga-ingqungquthela yayiza kufuneka iphelelwe lixesha.
Ndiyibhale le 31 Agasti. Nceda uthathe ingxaki:
I-DNA yindlela entsha yemilingo yamapolisa kunye nobulungisa kwaye wonke umntu ugcwele udumo! Nge-DNA unokusombulula yonke into. Umzekelo, ukuba ummelwane wakho ufunyanwe efile kwaye kukho i-DNA kwiingubo zakhe, ngoko siyazi ngokukhawuleza ukuba ngubani umbulali! Oko ngokwenene kukho impumelelo kwinkqubela phambili kwezobuchwepheshe engekaze yenzeke.
Ukuveliswa kwevili, injini ye-steam, umbane kunye ne-intanethi beyizinto eziqhubekileyo, kodwa i-DNA mhlawumbi iyona nto ihamba ngayo. Siyabulela kule DNA esaziyo i-100% ngokuqinisekileyo ukuba uJos Brech ungumbulali kunye nomxhaphazi wesondo ngo-Nicky Verstappen. Ngoko ke ithambo lokuvuyisa ngomnkantsha ukuba intsapho kaNicky igqityiwe ekugqibeleni. Unokucinga ukuba umama ufuna ukubheka umbulali onyantyala emehlweni!
Lo msebenzi, ukuba i-DNA?
Eyona nto inyanisekileyo, wonke umntu unomgaqo oyingqayizivele, njengoko ibhakhodi epharityhulam ihlala iyingqayizivele. I-DNA yinto ekhethekileyo kubo bonke abantu. Ngokomzekelo, unokufumana ukufana phakathi kwabazali nabantwana, ngenxa yokuba iimpawu zofuzo zizuze njengefa, kodwa i-DNA ayizange ibe yinto efanayo, ngaphandle koko uya kuba yinkampani. Ngoko ke ukuba unomntu we-DNA ukusuka kumgca wesine okanye wesihlanu kwintsapho, mhlawumbi kusekho ukufana okufanayo kufumaneka, kodwa ngoko-ke mahluko maye sele akhule kakhulu.
Ndiyabulela kule khowudi eyingqayizivele, unokubona ngeDNA ngokuchanekileyo ukuba umntu uthintana nomntu okanye into ethile. Oko kusenokuba yi-peel peel okanye isikhuni sempumlo. Ngoko-ke ukuba uya kuba nekhofi nommelwane wakho namhlanje, ngoko ke kungenzeka ukuba u-99,9% ushiya i-DNA endlwini yakhe. Lo ngumzekelo kwibhedlele ohleli kuyo, kwikomityi yekhofi okanye kwiingubo zommelwane, ngenxa yesibalo sokuba umnike isandla. Mhlawumbi uye wambetha phezu kwamagxa kwaye kukho ezinye iindunduma okanye zikhupha izitya zakhe.
Masithi ngoku ummelwane ofanayo ufunyanwa efile ngosuku olulandelayo endlwini yakhe, emva kokuba unina uzame ukufikelela kuye ngefowuni yonke imini. Uya kufumaneka efile, kodwa ngokucacileyo ukuba wafa njani. Emva kwe-autopsy ye-NFI, kubonakala ukuba akukho mkhondo ebonisa ukubulala. Emva kophando, amapolisa akafumananga nantoni na enokunika naluphi na uphawu, kodwa fumana iDNA yakho kwimpahla kunye nombhede wommelwane.
Ingxelo ye-autopsy ayibonakalisi nto kwindlela yokuqhagamshelana ngesondo, ngoko akukho sizathu sokuba sicinge ukuba ummelwane uxhatshazwa ngokwesondo.
Nangona amapolisa akuthathele ukubuza imibuzo ukuze afune ukuba ngaba kukho ukuthetha ngokubulala okanye ukuxhaphazwa ngokwesondo, uya kukhutshwa emva kweentsuku ze-3. Unokuphefumula kwakhona, ngenxa yokuba uyazi ukuba i-DNA yakho yafunyanwa kuphela kummelwane, kuba wayenaye kwikhofi.
Ukumangalelwa kwimeko yesondo
Ngoku uye wabuzwa umbuzo kwimeko yokuxhatshazwa ngokwesondo, apho ubizwa ngokuba ngumsolwa. Uchithe ngokuhlwa ehotele apho loo busuku kwakukho imeko yokuxhatshazwa ngokwesini. Uhlolisisiwe kwaye zonke iintlobo zeengxelo zengqina zibonisa ukuba awuzange ube negalelo kule nkcazo yokuxhatshazwa ngokwesini. Wayekho ehotele ukuba uhambo loshishino. Ngoko ke ukhululekile kwaye umenzi wobubi uqobo uyagwetywa. Nangona kunjalo uye wabandakanyeka kwimeko yokuxhatshazwa ngokwesini.
Ngeenyanga kamva uvula ithelevishini kwaye ubukele kwi-zap ukusasazwa nguPeter R. de Vries. Kulapho ukhangele ngokukhawuleza ukuba unomdla ndlebe kunye nomama wommelwane wakho. U-Peter R. de Vries ubiza umnqweno ukuba akubophe njengomntu osesikweni esicaleni kwimeko yokubulala, ngenxa yokuba i-DNA yakho ifumaneka endlwini kwaye uye wabandakanyeka kwimeko yokuxhatshazwa ngokwesondo! Akufani nawe ukuba ungumbulali nomdlwenguli wommelwane wakho!
Ngaba ubona iziphi iingxaki xa unokufumana i-DNA ukuba u-100% ubungqina bento ethile buqwalaselwe? Uhlala ufuna inkxaso. Ukuba khona kwindawo ethile akuthethi ukuba ungumbulali okanye umxhaphazi wesini. Ukubandakanyeka kwisenzo sokwabelana ngesondo akuthethi ukuba uye wagwetywa kwiimeko zokuxhatshazwa ngokwesini.
Kutheni i-DNA ibaluleke kangaka?
Kubonakala kunzima ukuba ityala likaNicky Verstappen yi-PsyOp (ukusebenza kwengqondo) okufuneka kuqinisekiswe ukuba lonke iNetherlands liza kubona iDNA njengegama elitsha lomlingo. Wonke umntu waseNetherlands kwafuneka aqiniseke ukuba kulungile ukuba athathe i-DNA kuwo wonke umntu aze afake kwi-database yesizwe. Kufuneka ukuba kubekho ngokusemthethweni ukubonelela nge-DNA njengobungqina kuzo zonke iimeko zomthetho (awukho mfuneko yokuyikrazula endlwini kaJos Brech, kwimeko ephosakeleyo kwaye ukhathazeke ngoku ngokungavumelekanga ngokomthetho).
Kufuneka nethemba lokuba uye wacacisa kwinqanaba le-anecdote elingentla elingenakuthetha nantoni na ngolwaphulo-mthetho. Kwimeko kaNicky Verstappen, umzekelo, ingxelo ye-NFI ye-autopsy ayizange ibonise ukuba wayebulewe. Kwakhona, akukho bungqina bokuba kukho ukusetyenziswa kakubi ngokwesondo. Ngoko ke kuthelekiswa necala lakho elichazwe ngasentla kunye nommelwane.
Ngaba ufuna ukuphelela kwimeko ezayo? Ukuba umthetho omtsha uza kuza ngokukhawuleza - ngenxa yecala le-media hype kunye no-Peter R. de Vries-, ngoku kuya kufuneka ugqoke i-hairnet kunye neiglavu zerabha xa usenza ikhofi kunye nommelwane.
Ifayile yezobugebengu uNicky Verstappen 29 Juni 2001:
Isizathu sokufa asikwazi ukumiselwa kwakhona; Ukuxhatshazwa ngokwesondo kuya kubuzwa. Ukuphazamiseka okupheleleyo kubakho malunga nophando olutsha ngexesha lokufa.
Yaye ukuba uvumele ukuba konke kudibanise, ndincoma ukuphonononga imeko ekhoyo yangoku kwintsimi yokudala imifanekiso. Kungenxa yokuba kunokwenzeka kwaye kuba kunokunceda ukwazi okuthile malunga nayo.
Asikuphela nje ukuba sikwazi ukuba nomntu onika intetho exoxa kwi-2016 kwaye, ngexesha langempela, sebenzisa ubuso kunye nezwi lomnye umntu phezu kwayo (jonga apha), isofthiwe ye-NVIDIA inokudala abantu abangabikho ngokupheleleyo (bona ngezantsi). Kodwa bah, ngokwenene asifuni nje ukuva oko! Musa ukuhamba ne-bran nge-actor-patsy-for-big-money okanye into enjalo. Yilahle! Complotkolder! Sifuna nje ukubona igazi. Lu lungile! Hlala kuloo ndwendwe! Kwaye ngoku ngokukhawuleza kufuneke ukuba kuphelelwe i-DNA, kungekhona ukutshintsha.
Funda yonke ifayile apha
Icala likaNicky Verstappen, umenzi wobubi uJos Brech kunye nomhlobo we-bushcraft uVan 't Padje: impumelelo kaPeter R. de Vries
Ukwenza umbulali kuNicky Verstappen - Jos Brech PsyOp
UJos Brech wabanjwa kwidolophana yaseSpanish yaseCastelltercol! Umfundi we-Telegraaf unikeza isipho segolide!
I-positive ye-DNA yedatha yedatha ngaphezu kokuxazulula amatyala okubulala
Ubungqina bokuthi uGerald Roethof ubonakala ngathi ngummeli we-PsyOp kwimeko yeJos Brech
tags: by, umenzi wobubi, eziziimbalasane, Jos Brech, eendaba, ku bulala, UNicky Verstappen, UPeter R. de Vries, labucala, trial, u krokrela, moya
7 Septemba 2018 kwi-01: 05
Ibali lifumana i-crazier. NgoLwesine uSeptemba 6, uBetweter uPeter R. de Vries uthi uYos Brech akazange athathe inxaxheba kwi-DNA test mass. Ngaba i-DNA 'iya kutshatyalaliswa' iminyaka emininzi edlulileyo kuba ayifanelekanga?
7 Septemba 2018 kwi-18: 45
Mhlawumbi ingxaki yo kwenene kukuba sihlala sigxile kweli hlabathi. Siyakwazi ukuqaqa phezulu okanye ngaphantsi, kodwa ukuba ungangeni ngaphakathi ukuze ufumane inyaniso yakho, uninzi okanye ulahlekile. Ngokwenene yonke into iyimangalo.
Kubonakala ngathi ihlabathi alilungele ukucinga, okanye uqhagamshelane nomphefumlo.
Nangona nje ungafuni ukungena ngaphakathi, iyayeka.
Njengoko uMartin uyaziqonda.
Kukho enye kuphela. 1
« Ukukhuphisana namaqhinga kunye noTom Kleijn
U-Elon Musk malunga nenkolelo yokulinganisa, ithemba kunye 'nohambo' »
Iindwendwe ezipheleleyo: 15.902.796
Ilanga op ILibya ibonelela ngokucacileyo malunga namazwe aseYurophu ukuba angowokuqala ukuthathwa yiTurkey
SandinG op ILibya ibonelela ngokucacileyo malunga namazwe aseYurophu ukuba angowokuqala ukuthathwa yiTurkey